How to Cope with Criticism (Part 1 of 2) – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 19 November 2009 17 February 2010 Categories Reproduction, Translation
4 thoughts on “How to Cope with Criticism (Part 1 of 2)”
စာကောင်းပေကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ် ဆရာ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဝေဖန်မှုတချို့ကြောင့် ကြေကွဲကျဆုံးနေချိန်… ဆရာ့ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ပြန်လည်ထူမတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ဦးမည်။
22 November 2009 at 9:22 am
It’s great that you have translated this kind of article and shared with us to read. We can learnalot from this. I hope you will continue to do so. Even though I would like to do the same thing like translatingagood piece whenever I read one, I am unable to do so as doingatranslation is alsoapiece of art and talent, by itself. Unfortunately, i possess neither 🙂
I appreciate your effort and goodwill towards our fellow countrymen. In the meantime, I will search for this book.
ဝေဖန်တာ မခံရဖူုးတဲ့ လူဆိုတာ မရှိနိုင်ပါ ဘူး ၊ များများ လုပ်လေ များများဝေဖန်ခံရလေပဲ ၊ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ထိုင်နေရင်လည်း ဝေဖန်ခံရမှာပဲ ၊ လူ့လောက မှာ ဝေဖနတ်ာလွတ်အောင်နေလို့မရနိုင်ဘူး ၊ကောင်းတာလုပ်တဲံ .ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လည်း ဝေဖန်တာ ခံရတာပဲ လေ ။ ဒါကြောင့် ခံနိုင်ရည် ရှိအောင်ပဲ ကြိုးစားရမှာပေါ့
Previous Previous post: Excerpts from “For Babygirls to Learn”
Next Next post: How to Cope with Criticism (Part2of 2, Last)